Huawei Nova 5 sy Nova 5 Pro: Famaritana, vidiny ary fandefasana | Androidsis
Huawei Nova 5 sy Nova 5 Pro: havaozina ny faritra
Araka ny voamarina herinandro vitsivitsy lasa izay, androany dia natolotra ny laharana Huawei Nova 5. Ny marika sinoa dia mamela antsika modely vaovao amin'ity sokajy ity, izay havaozina miharihary. Volavola vaovao, famaritana vaovao ary telefaona telo ao anatin'ity faritry ny orinasa ity. Ny roa voalohany dia ny Nova 5 sy ny Nova 5 Pro. Ireo dia maodely roa mitovy, izay tsy mitovy amin'ny processeur ampiasainy, ny fitadidiana. Na dia efa nisy aza ny tsaho, dia toa iray ihany ireo fakantsary.
Ny Huawei Nova 5 dia maodely antonony antonony, izay Kirin 810 no mampiasa azy amin'ny farany, araka ny tsaho. Etsy ankilany dia manana ny Nova 5 Pro isika, izay maodely avo lenta, izay mampiasa Kirin 980 ho mpikirakira azy. Ny endriny dia mitovy amin'ny tranga roa.
Ireo finday roa dia manao fampiasana notch amin'ny endrika rano indray mitete eo amin'ny efijery. Famolavolana tena ankehitriny, fa mahazatra tokoa, satria saika ny marika Android rehetra dia manana telefaona miaraka amin'ity endrika ity. Saingy zavatra mandeha tsara izy io, tian'ny mpampiasa izany, ary koa mamela anao hanararaotra tsara ny alohan'ny telefaona. Manaraka izany dia lazainay aminao bebe kokoa momba ireo maodely roa an'ny marika sinoa ireo.
Ahoana ny fomba hanombohana maody azo antoka amin'ny telefaona Huawei
1 Famaritana Huawei Nova 5 sy Nova 5 Pro
Famaritana Huawei Nova 5 sy Nova 5 Pro
Ny fahasamihafana misy eo amin'ireo maodely vaovao an'ny marika sinoa dia kely dia kely. Saingy safidy roa mahaliana indrindra izy ireo, ho an'ny karazana mpampiasa rehetra. Avelanay eto ambany ianao miaraka amin'ny antsipiriany feno momba ireo Huawei Nova 5 sy Nova 5 Pro, izay natolotra tamin'ny fomba ofisialy androany maraina tamina hetsika iray tany Shina:
SCREEN 6,39-inch OLED miaraka amin'ny vahaolana FHD + 2.340 x 1.080 teboka ary ny tahan'ny 19,5: 9 6,39-inch OLED miaraka amin'ny vahaolana FHD + 2.340 x 1.080 teboka ary ny tahan'ny 19,5: 9
PROCESSOR Kirin 810 Kirin 980
FITONDRANA AN-TANY 128GB (azo ovaina hatramin'ny 512GB miaraka amin'ny microSD) 128/256 GB (azo ovaina hatramin'ny 512 GB miaraka amin'ny microSD)
CAMERAS REAR 48 MP + 2 MP + 16 MP + 2 MP 48 MP + 2 MP + 16 MP + 2 MP
CAMERA HATRANY MP 32 miaraka amina f / 2.0 aperture MP 32 miaraka amina f / 2.0 aperture
RAFITRA FIKIRAKIRANA Android Pie miaraka amin'ny EMUI 9.1 Android Pie miaraka amin'ny EMUI 9.1
BATERA 4.000 mAh misy fiampangana haingana 40W 3.500 mAh misy fiampangana haingana 40W
CONNECTIVITY 4G / LTE, Bluetooth 5, WiFi 802.11a / b / g / n / ac, USB-C 4G / LTE, Bluetooth 5, WiFi 802.11a / b / g / n / ac, USB-C
OTHER Fitaovana fakantsary aoriana, NFC, kapila finday NFC, mpamaky rantsan-tànana an-tsary, jack an-telefaona
lafiny 159.1 x 75.9 x 8.3 mm.
178 Gram X X 157.4 74.8 7.33 MG
Araka ny hitantsika, ny telefaona roa dia misy lafiny maro itovizany. Na dia misy aza ny tsy fitoviana, izay mahatonga ny iray ho tampon'isa vaovao ho an'ny marika sinoa ary ny iray hafa dia aseho ho toy ny sainam-pirenena vaovao eo amin'ny elanelam-potoana premium, ampahany iray izay i Huawei dia mbola iray amin'ireo marika manandanja indrindra amin'ny izao tontolo izao.
Ny processeur no fiovana lehibe eo amin'ny telefaona roa. Tonga ny Huawei Nova 5 miaraka amin'ny puce Kirin 810 vaovao, izay ahitana vaovao marobe tato anatin'ny herinandro. Sipa matanjaka manome fahombiazana tsara, ary koa noforonina mba hiasa tsara amin'ny lalao. Raha mampiasa Kirin 5 ny Nova 980 Pro, ny chip avo lenta an'ny marika sinoa. Mahery, miaraka amin'ny fampisehoana tsara, ary miaraka amin'ny fisian'ny faharanitan-tsaina artifisialy.
Huawei dia nanaparitaka telefaona finday vaovao
Ny marika sinoa dia mampiditra fakan-tsary efatra any aoriana amin'ireo telefaona ireo. Na eo aza ny tsaho, ny fitambarana dia mitovy amin'ny maodely. Tonga miaraka amin'ny ny Nova 5 sy ny Nova 5 Pro fampifangaroana 48 + 16 + 2 + 2 MP ary anoloana 32 MP. Fakan-tsary sasany izay miaraka amin'ny faharanitan-tsaina. Ka afaka manantena ny fahitana sary tsara sy ny fahombiazana tsara isika.
Amin'ny ankapobeny dia hitantsika ny marika Sinoa mamela antsika amin'ny fitaovana roa kalitao, izay manana ny fahafaha-mivarotra tsara sy hahomby eo amin'ny tsena. Ka azony antoka fa tena tian'izy ireo izy ireo. Amin'ny lafiny teknika dia tsy diso fanantenana mihitsy izy ireo.
Amin'izao fotoana izao dia voamarina izany ny fandefasana an'io faritra io ihany any Shina. Any amin'ny firenena Aziatika dia manomboka amin'ny 28 Jona izy ireo. Na dia manantena izahay fa tsy ho ela dia hisy vaovao momba ny fandefasana azy any Eropa, satria sehatra iray miteraka fahalianana izany. Na dia ny toe-javatra sarotra amin'ny orinasa aza dia mety hanemotra kely ny fandefasana azy any amin'ny kaontinanta. Tsy fantatray hoe rahoviana izy ireo no havoaka.
Ireo Huawei Nova 5 sy Nova 5 Pro dia natomboka tamin'ny loko maro samihafa, izay hitantsika amin'ny sarin'izy ireo. Mainty, maintso, volomparasy na volomboasary no loko hitantsika hatreto. Rehefa nalefa tany Eropa izy ireo dia tsy fantatsika raha hanana na tsia ny loko rehetra, fa manantena izahay fa. Navoaka tamin'ny kinova maromaro ireo fitaovana ireo, raha ny maodely Pro. Ireo no vidin'izy ireo voamarina hatreto any Chine:
Huawei Nova 5 miaraka amin'ny 8/128 GB dia sarany amin'ny 2799 yuan (eo amin'ny 360 euro)
Ny Huawei Nova 5 Pro miaraka amin'ny 8/128 GB dia mitentina 2999 yuan (eo ho eo amin'ny 385 euro novaina)
Ny Nova 5 Pro miaraka amin'ny 8/256 GB dia hanana vidiny 3399 yuan (eo ho eo amin'ny 435 Euros novaina)
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Huawei Nova 5 sy Nova 5 Pro: havaozina ny faritra
Huawei Nova 5i: ny afovoany vaovao an'ny marika
Google dia manamafy fa tsy liana amin'ny takelaka